ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: ချစ်သူ့ ဗာလင်တိုင်
တီဗီမှာ ဂျပန်တွေရဲ့ ဘယ်နေရာက သူများနဲ့ လွဲနေလည်းဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေဆွေးနွေးကြတာကြည့်လိုက်ရတယ်။
နံပတ်တစ် က တော့ ဗာလင်တိုင်တဲ့
ဂျပန်မှာက ဗာလင်တိုင်ဆိုရင် မိန်းကလေးက ..ပေးကြတာကိုး။ တစ်ချို့ ကိုယ်တိုင် Homemade chocolate လုပ်ပီးဗာလင်တိုင်မှာ သဘောကျတဲ့ အမျိုးသားကိုပေးကြတယ်။ အမျိုးသားကလည်းကောင်မလေးရဲ့ စိတ်ကိုနားလည် လက်ခံပါတယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာစွာနဲ့အဲ့ချောကလက်ကိုစားကြတယ်။ ဂေါ်မစွံသူလူပျိုကြီးတွေ
ပေးမယ့်သူမရှိတဲ့သူတွေကြတော့ တခြားမိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတွေက Giri..choco( ဂီရိ ချောကို) ဆိုပီး ပြောပြီးတော့မှ ပေးကြတယ်။
သဘောကတော့. ဘာစိတ်မှမပါပဲသူငယ်ချင်းကိုအားပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ ။
လူပျိုတွေကိုပေးသလို တစ်ချို့လည်းကိုယ့်အထက်အရာရှိတွေကိုပေးတယ်။ ကျွန်မတို့ အုပ်စုလည်း ပရော်ဖက်ဆာ ၃ ယောက်ကိုပေးဖို့ စုဝယ်ထားကြပြီးပြီ။
တစ်လောက ဖေဖေနဲ့ မေမေအိမ်ထောင်သက် ၃၇ နှစ်ပြည့်ကို အမှတ်တရရေးချင်နေတာ။
၀န်ထမ်းဖေဖေနဲ့ မှီခိုသူမေမေဟာ တစ်ခါမှ ခွန်းကြီးခွန်းငယ်မတွေ့ဖူးဘူး။ ခုနောက်ပိုင်းမှသာ ညည်း
တို့ ဖေလေ ဘာပေါ့ညာပေါ့ .ဖေဖေကလည်း ညည်းတို့အမေလေဘာညာဆိုပြီး ..ပြောတတ်တာ.
မေမေဟာသည်းခံလွန်းတယ်။ ဖေဖေဟာမေမေ့ကိုလေးစားလွန်းတယ်။ ကျွန်မကတော့ မေမေ့ဆီက အပင်စိုက်ပျိုးတာကို အမွေရပီး ဖေဖေဆီက အအိပ်ကြိုက်တာကိုအမွေရပါတယ်။
နှစ်ယောက်စလုံးကနေ မဟုတ်ပဲ အလိုလိုရတာက ကြွားတတ်ခြင်းပါး)))))။
အိပ်ပုပ်ကြည်ကြည်ကို ဖေဖေကအမြဲ ငါနဲ့ တူတာငါနဲ့ တူတာ လို့ပြောတတ်တယ်။
တခါက ကျွန်မအဖေနဲ့ သူ့ သားမက် ကျွန်မတို့ ဂေါက်အတူရိုက်ကြတော့ သမီးကြီးမို့လို့ချစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ပစိပစပ်များ.၊ လိုချင်တပ်မက်စိတ်တွေများတဲ့ကျွန်မကို ဖေဖေက ကြည့်မရဘူးလို့ပြောလေ့ရှိတယ်။ ဂေါက်ကွင်းထဲမှာ ဖေဖေ က သူ့ သားမက်ကို အေး.သားရေ မင်းမိန်းမ င့ါသမီးပါပဲကွာ အတော်ကို နားငြီးတာပဲံ။ မင်းအတော်သည်းခံနေရမှာပဲ။ ငါသိတယ်ငါသိတယ်လို့ ပြောတော့ အိမ်က လူု က ဟုတ်ကဲ့ အဖေ့မိန်းမ ကျွန်တော့ ယောက်ခမနဲ့ တော့ မတူဘုးလေ အဖေရယ်တဲ့ ။ ကယ်ဒီတွေဆိုတာ ရီလိုက်ကြတာတအုန်းအုန်း။
ဖေဖေက မေမေ့ ကို မွေးနေ့ တိုင်း အ၀တ်အစားတစ်စုံအမြဲ ခုချိန်ထိမပျက်မကွက်ဝယ်ပေးတုန်း မေမေကလည်း နှစ်ပေါင်းများစွာက ၀တ်စုံတွေကိုခုချိန်ထိ တမြတ်တနိုးသိမ်းထားတုန်း။ . ခရီးသွားတိုင်း ဖေဖေက မေမေဆီကိုပို့စ်ကဒ်လေးတွေ ပို့တတ်တယ်။ နာမည်ဘေးမှာ သို့ချစ်ဇနီးလို့ ရေးတတ်သေးတယ်။
သားအဖနှစ်ယောက်အတူတူမျက်နှာပေါင်းတင်တိုင်း မေမေက စိတ်မလျှော့သေးပဲကိုးလို့ ပြောတယ်။
မေမေဆံပင်ဆိုးဖို့ မေ့နေရင် ဖေဖေက မင်းဆံပင်ဆိုင် မသွားဘူးလားပြောနေတုန်း။
အဲ့လိုပဲ ခြံလေးထဲမှာ ဖေဖေ အရက်သောက်တိုင်း မေမေက ဘေးကနေ အမြည်းလေးထိုင်စားရင်း
စကားတွေပြောနေတုန်း.. ဖေဖေက သားမက်အငယ်(၀န်ထမ်းမို့ လို့ ) ကိုယ် သိက္ခာနဲ့ ရိက္ခာဆိုတဲ့စကားအတော်ဆုံးမတယ်။
ဖေဖေဟာ သိက္ခာဆိုတာကိုပဲကြည့်တော့ ရိက္ခာမပြည့်ဘူးပေါ့ကွာတဲ့ …အဲ့ဒီအခါမှာ မေမေက ဟုတ်ပ..၇ှင့် ရိက္ခာသိက္ခာကိစ္စကြောင့်
ကျုပ် စိန်နားကပ်ကြီးကြီးမပန်ရတာတော့အမှန်ဆိုပြီး လှမ်းကလိတတ်တာတော့အမှန်.။
အလှူအတန်း လိုက်ဖက်ညီင်္စွာ . ပကာသနမမက်တာလည်းတူ မိသားစုကို ဂရုစိုက်လွန်းသော
မိခင်ဖခင်တို့ ၏ ဗာလင်တိုင်ပေါင်းများစွာ ….ဆန္ဒပြုလျှက်..
ရန်ကုန်မှာသာဆို အဖေ့ကို ချောကလက်ပို့ ပေးမှိမှာအမှန်။
ဒီပို့ စ်ကို အဖေ့ မေလ်းထဲ ထည့်ပေးလိုက်မယ်။သားအဖနှစ်ယောက်မချက်ရတာလည်းကြာပီ. (ချက်တာကသူု့ တပည့်ကိုကြားခံပီးချက်ရတာ)။
ပြုံးနေမှာသေချာတယ်။ပြီးရင် သမီးကြီး ကျန်းမာပါစေဗျာလို့ဆုတွေတောင်းနေလိမ့်မယ်။
ကျွန်မဘက်ကအယူဆိုတာပဲရှိခဲ့တယ်။ သူ့ ကို ဒီတစ်ခါပြန်ပေးတဲ့အနေနဲ့ တနေ့က ရန်ကုန်ကို ပို့စ်စကဒ်တစ်စောင်စာရေး ပြီးပို့ လိုက်တယ်။
ခလေးကလားလို့တော့ ထင်နဲ့လေ နော်...........
Posted by ကြည်ကြည် at 4:35 AM
Anonymous February 17, 2011 at 7:57 AM
မြန်မာ့ ရနံ့ (အဆောင်နေဘ၀အမှတ်တရ)
တို့ ကမျိုးနဲ့ ရိုးနဲ့ 